Amin’ny maso sy mahasoa… tsy miangatra | NewsMada
Par Taratra sur 18/11/2020
Tena marina ny hoe tsy misy jamba toy izay minia mikimpy? Na marenina toy izay minia marenina… Inona, hono, ny zavatra miova eto amin’ny firenena amin’izao? Izay ny vavan’ny mpanohitra sasany. Tena tsy misy tokoa ve izay? Na minia mikimpy sy marenina na entin’ny fankahalana, hany ka maizina avokoa ny zava-drehetra.
Aza gaga raha tofoka amin’ny afitsoky ny mpanao na ny mpilalao politika ny ankamaroan’ny olona. Toy ny hoe ny tena ihany no inona: manao zavatra, mahavita zavatra. Fony teo amin’ny fitondrana, ohatra, misy sahy miantsanantsana fa izay tsy natao tao anatin’ny 50 taona, vita iray volana na herintaona. Izany moa ny inona?
Rehefa eo amin’ny fitondrana, toy ny hoe ny tena ihany no hany tia tanindrazana, mahalala sy mitsinjo vahoaka… Tsy vitan’izany, hany tokana an-tany manao sy mahavita zavatra hoe fampandrosoana. Manginy fotsiny, izay mahita na milaza zavatra ankoatra izany: soketaina ambony ihany ho fahavalom-pirenena, manakorontana, potehina…
Rehefa tsy eo amin’ny fitondrana indray, tabatabaina fa famonoana vahoaka sy famotehana firenena izay rehetra ataon’ny mpitondra. Tena tsy misy na inona na inona miova tokoa ve eo amin’ny tany sy ny fanjakana? Na eo amin’ny fiainam-bahoaka… Aleo ny tsirairay no mitsara fa tsy izay lazaina sy hitan’ny tena no hany marina.
Ny zava-doza: manakorontana rehefa tsy mahasarika sy mahazo vahoaka amin’izany. Tsy mety misy fiovana ny fomba fanaovana politika? Tsy firy ny mijery amin’ny maso tsy miangatra amin’izay tena mahasoa amin’ity hoe fitiavan-tanindrazana… hirahiraina lava. Na misy izay mety mahasoa ny vahoaka aza, toherina fotsiny izao.
Aza gaga raha tsy miova koa ny fomba fanaovana politika, ny fijerin’ny maro ny mpanao politika sy ny fanaovana politika… Lazaina fa tsy misy inona miova eto noho ny tsy fijerena amin’ny maso tsy miangatra. Tsy ny tena mpitsikera befahatany noho ny fiheveran-tena diso ve no tsy misy fiovana voalohany amin’ny maso tsy miangatra?